Funda iNqanaba lokuRhweba ngeNyathelo ngenyathelo nge-2020, Ukurhweba nge-Forex yabaqalayo Isikhokelo sika-XNUMX
Education - Amanqaku kunye tutorials - amanqaku asekelwe ngaphambili - Funda ngerhwebo ngerhwebo inyathelo ngenyathelo
Isebenza njani i-forex? Iimfuneko ezisisiseko zorhwebo lwe-Forex Amanyathelo kurhwebo lwe-Forex
Ukukhetha umthengisi ofanelekileyo
Funda amagama abalulekileyo
Vula iakhawunti yeedemo
Khetha isoftware yokuthengisa
Khetha isibini semali
Zama ezinye iindlela zokurhweba
Ii-FAQ zokurhweba ngeMali ye-Forex isiphelo
Kwesi sikhokelo, siza kusombulula yonke imibuzo yakho malunga ne-forex. Ke, masiqalise.
Isebenza njani i-forex?
Ukurhweba nge-Forex akwenzeki kutshintshiselwano njengezinto zentengiso kunye nezitokhwe, endaweni yoko kuyintengiso ethe kratya yokuthengisa apho amaqela amabini athengisa ngqo ngomthengisi. Imakethi ye-forex isebenza ngeinethiwekhi zeebhanki. Amaziko amane okurhweba asisiseko yiNew York, London, Sydney kunye neTokyo. Ungarhweba iiyure ezingama-24 ngosuku ukusuka ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu. Zintathu iintlobo zeentengiso ze-forex ezibandakanya imakethi ye-ndawo ye-forex, ikamva lemarike ye-forex kunye nentengiso ye-forex phambili.
Uninzi lwabarhwebi abacinga ngamaxabiso e-forex abayi kucwangcisa ukuthatha ukuhanjiswa kwemali ngokwayo; endaweni yoko benza uqikelelo lwexabiso lokutshintsha ukuze bathathe amathuba okuhamba kwamaxabiso kwimarike.
Abarhwebi be-Forex bahlala becacisa ngokunyuka okanye ukwehla kwamaxabiso esibini semali ukufumana inzuzo.Ngumzekelo, amaxabiso otshintshiselwano nge-EUR / i-USD ibonisa ixabiso lomyinge phakathi kwe-Euro neDola yaseMelika. Ivela kubudlelwane phakathi kokubonelelwa kunye nemfuno.
Iimfuneko ezisisiseko zorhwebo lwe-forex
Sele uzalisekisile ezona zinto zisisiseko zibalulekileyo zokuthatha inxaxheba kurhwebo lwe-Forex ukuba unekhompyuter kunye noqhagamshelo lwe-Intanethi.
Ngoku ukuba unolwazi oluchanekileyo malunga nemakethi ye-Forex masiqhubele phambili kwindlela onokuthi ufunde ngayo urhwebo lwe Forex inyathelo ngenyathelo.
Amanyathelo kurhwebo lwe-Forex
Ngaphambi kokuqala ukuthengisa okwenyani, zimbalwa izinto ekufuneka uziqwalasele kuqala. La manyathelo ayinxalenye yenkqubo yakho yokufunda.
1. Ukukhetha umthengisi ofanelekileyo
Ukukhetha umrhwebi ofanelekileyo lelona nyathelo libaluleke kakhulu kurhwebo lwe-forex njengoko ungenakwenza ukurhweba nge-intanethi ngaphandle komthengisi kunye nokukhetha umthengisi ongalunganga kunokuphelisa amava amabi kakhulu kwishishini lakho lokurhweba.
Kuya kufuneka uqiniseke ukuba umrhwebi ubonelela ngexabiso eliphantsi, ujongano oluhle lomsebenzisi, kwaye ngaphezulu kwako konke, a iakhawunti yeedemo.
Ne iakhawunti yeedemo, ungafumanisa ukuba umrhwebi ukufanele okanye hayi. Ikuvumela ukuba uvavanye kwaye ihlaziye izicwangciso zakho ze-forex.
Ukuba umntu ufuna ukukunika into okanye unqwenela ukuyinikela ngeyona meko ilungileyo, kuya kufuneka ukrokre. Uyacetyiswa ukuba ujike kwelinye lamaqonga asele elawulwa ngabasemagunyeni bamazwe abo.
2. Funda amagama abalulekileyo
Kuya kufuneka ufunde imigaqo ethile yokuthengisa ngaphambi kokuqala uhambo lwakho. Nanga amabinzana omele ukuzama ukuwaqonda.
- Imali yokutshintsha
Ixabiso libonisa ixabiso langoku lesibini semali.
Lixabiso apho iFXCC (okanye elinye iqela eliphikisayo) inikezela ukuthenga isibini semali kumxhasi. Lixabiso umthengi oza kuthi acatshulwe xa efuna ukuthengisa (yiya kufutshane) isikhundla.
- Buza ixabiso
Lixabiso apho imali, okanye isixhobo esinikezelwa sithengiswa yi-FXCC (okanye elinye iqela eliphikisayo). Ixabiso eliceliweyo okanye elinikezelwayo lixabiso elifanelekileyo umthengi aya kuthi acatshulwe xa efuna ukuthenga (hamba ixesha elide) isikhundla ..
- Isibini semali
Iimali zihlala zithengiswa ngababini, umzekelo, i-EUR / i-USD. Imali yokuqala yimali esisiseko, kwaye okwesibini yimali eqokelelweyo. Oku kubonisa ubungakanani besixa semali sexabiso esifunekayo ukuthenga isiseko semali.
Umahluko phakathi kokubhida kunye nexabiso lokubuza ubiziwe sasaza.
Inkqubo yokuvavanya iitshathi zangoku ukuqikelela ukuba yeyiphi na indlela yentengiso eya kuhamba elandelayo.
-Khomishini / iifizi
Yintlawulo umrhwebi onje ngeFXCC anokuhlawulisa kurhwebo ngalunye.
Umyalelo wentengiso usekwe kwixabiso langoku elibekiweyo kwintengiso. Ukuba unikezela ukuthenga okanye ukuthengisa iodolo, uya kuba nakho ukufikelela kurhwebo ngokukhawuleza.
- Nciphisa umda
Umyalelo wokumiselwa wenza ukuba umrhwebi asete umda wexabiso ukuya kulo izibini lwangoku ziyathengwa okanye ziyathengiswa. Oku kuvumela ukucwangcisela ukurhweba ngamanqanaba athile amaxabiso kwaye kuthintelwe amaxabiso aphezulu okuthenga okanye ukuthengisa amaxabiso aphantsi kakhulu.
-I-odolo yokuyeka ilahleko
Ngomyalelo wokulahleka kokumisa, umrhwebi unokukunciphisa ukulahleka kurhwebo ukuba ixabiso liya kwicala elahlukileyo. Umyalelo uyasebenza xa ixabiso lesibini semali lifikelela kwinqanaba elithile lamaxabiso. Umrhwebi angayibeka into yokulahleka xa evula urhwebo okanye angabekwa nasemva kokuvula urhwebo. Umyalelo wokulahleka kokumisa kwesinye sezixhobo ezisisiseko zokulawula umngcipheko.
Isiseko sivumela abathengisi ukuba bathengise imiqulu emikhulu kunaleyo igcinwe ngumgaqo-siseko. Inzuzo enokubakho iphindaphindwe, kodwa imingcipheko nayo inyuka kakhulu.
Ngelixa ukurhweba i-forex, abathengisi bafuneka kuphela kwinxalenye encinci yemali enkulu ukuvula kunye nokugcina isikhundla sokurhweba. Eli nxalenye ye-capital ibizwa ngokuba yi-margin.
PIP iyunithi esisiseko kurhwebo lwe-forex. Ibonisa utshintsho kwixabiso lesibini semali. Umbhobho uhambelana notshintsho lwezifundo lwe-0.0001.
Kuninzi kuthetha iiyunithi ezingama-100,000 zesiseko semali kurhwebo lwezoqoqosho. Abarhwebi banamhlanje banikezela ngeeqashiso ezincinci ngee-10,000 iiyunithi kunye namaqashiso amancinci ngamacandelo ayi-1,000 XNUMX kubarhwebi abanemali ephantsi.
- Izibini ezingaqhelekanga
Izibini ezingaphandle azithengiswa rhoqo njengezona "majors". Endaweni yoko, ziimali ezibuthathaka, kodwa zinokudityaniswa kunye ne-EUR, i-USD, okanye i-JPY. Ngenxa yeenkqubo ezingazinziyo zezezimali, ezo zibini zixhaphakileyo zepesenti yemali zihlala zinobuzaza kakhulu kunezobixekileyo ezizinzileyo.
Umthamo lixabiso lilonke lomsebenzi wokurhweba wesibini semali. Ngamanye amaxesha ikwajongwa njengenani lilonke leekhontrakthi ezithe zathengiswa ngexesha losuku ..
- Yiya ixesha elide
"Ukuhamba ixesha elide" kuthetha ukuthenga isibini semali ulindele ukunyuka kwexabiso lesibini semali. Umyalelo uba yinzuzo xa ixabiso liphakama ngaphezulu kwexabiso lokungena.
- Yiya mfutshane
Ngokufutshane isibini semali sithetha ukuba ulindele ukuba ixabiso lesibini semali liza kuwa. Umyalelo uba yinzuzo xa ixabiso liwela ngaphantsi kwexabiso lokungena.
-Ayikho iakhawunti yokutshintsha
Ngaphandle kweakhawunti ye-swap, umthengisi akahlawulisi umrhumo wokurhweba ngokubamba nasiphi na isikhundla kurhwebo ngobusuku.
Abathengisi be-intanethi kwi-intanethi ngoku banikezela zonke iintlobo zeeakhawunti. Ukuba awuneemfuno ezizodwa okanye iminqweno, gcina iakhawunti esemgangathweni.
Iakhawunti encinci ivumela abathengisi be-forex ukuba bathengise ama-mini-lot.
Iakhawunti encinci ivumela abathengisi be-forex ukuba bathengise ama-micro-lot.
Urhwebo lwempazamo luvumela abathengisi ukuba bakhuphele ngokuzenzekelayo abanye abathengisi abaphumeleleyo nxamnye nomrhumo othile.
Umahluko phakathi kwexabiso lokuzalisa kwexabiso elifanelekileyo kunye nexabiso elifanelekileyo lokugcwalisa libizwa ngokuba kukutyibilika. I-Slippage ihlala yenzeka xa intengiso ingazinzanga.
Scalping yindlela yokurhweba yexeshana elifutshane. Ixesha eliphakathi kokuvula nokuvala urhwebo lingahluka ukusuka kwimizuzwana embalwa ukuya kwimizuzu embalwa.
3. Vula iakhawunti yeedemo
Sicebisa a iakhawunti yeedemo onokuzama ngayo ukurhweba kwangaphambili ngaphandle komngcipheko. Ke, unokufumana amava akho okuqala e-FX ngaphandle komngcipheko.
Iakhawunti yedemo isebenza njenge iakhawunti yenyani ngemisebenzi encinci. Apha unayo imali ebonakalayo onokuyisebenzisela ukuthengisa.
4. Khetha isoftware yokuthengisa
Abanye abathengisi banikezela nge-portal ekhethekileyo yokurhweba kwiwebhu ngelixa abanye abarhwebi beFX bekubonelela ngesoftware ethile okanye usetyenziso. Uninzi lwabathengisi baxhasa ukuthandwa MetaTrader uphawu lokuthengisa.
Ukuba usebenzisa i-intanethi ngokusebenzisa isikhangeli esingaqhelekanga, kuya kufuneka ucinge ukuba i-FX broker yakho ayixhasi. Ukuze ukwazi ukuthengisa kunye nomthengisi we-Forex, kuya kufuneka usebenzise usetyenziso kule meko - okanye ufake isikhangeli esinye esiqhelekileyo kwikhompyuter yakho.
5. Khetha isibini semali
Ukurhweba nge-Forex kwenziwa izibini lwangoku kuphela. Wena ke, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba yeyiphi isibini semali oza kutyala imali kuyo. Njengomgaqo, ii-majors kunye nabancinci ziyafumaneka. Ezona zibini zixhaphakileyo zemali zisenokuba EURUSD, USDJPY, yaye EURGBP.
6. Zama ezinye iindlela zokurhweba
Isicwangciso esiliqili sokudibana kwe-forex sibandakanya amanqaku amane:
Imiqondiso yokungena echaziweyo
Khetha iqhinga lokurhweba elikufaneleyo.
Nazi ezinye eziqhelekileyo izicwangciso zorhwebo:
Kwindawo ebizwa ngokuba "kukukroba," isikhundla sisebenza ikakhulu kwixesha elifutshane kakhulu. Njengomthetho, bavala urhwebo ngaphakathi kwemizuzu embalwa yokuvula kwabo. Abarhwebi baneliswa yingeniso ephantsi kurhwebo ngalunye xa befaka isikali. Ukuphindaphinda okuphindaphindiweyo kunokukhokelela kwimbuyekezo ephezulu kwixesha elide.
- Ukuthengisa kwemini
In urhwebo usuku, Amashishini avulwa kwaye avaliwe kungaphelanga usuku olunye. Umrhwebi wosuku uzama ukufumana ukusuka ekuguqukeni kwexesha elifutshane kwimarike ye-forex ethe kratya.
- Ukurhweba ngokurhweba
Ukurhweba nge-swing yindlela yexesha eliphakathi lokurhweba apho abathengisi babamba izikhundla zabo ngeentsuku ezimbini ukuya kwiiveki ezininzi kwaye bazama ukufumana inzuzo ephezulu kwintengiso.
Kwizikhundla zorhwebo, abathengisi balandela iindlela zexesha elide ukuze babone amandla aphakamileyo ukusuka kwinqanaba lokuhamba kwamaxabiso.
Ii-FAQ zokurhweba ngeMali ye-Forex
Ngaba kufanelekile ukutyala imali kwi-Forex?
Njengayo nayiphi na intengiselwano, kuhlala kukho umngcipheko wokulahleka xa urhweba nge-Forex. Kuya kufuneka ubeke isicwangciso esifanelekileyo sokurhweba i-forex ehambelana nobuntu bakho bokurhweba. Abo batyala imali ngobunono banokufumana imbuyekezo ephezulu yokurhweba nge-forex.
Leliphi elona qonga lilungileyo lokurhweba nge-forex?
Ukukhethwa kweqonga kubaluleke kakhulu kwaye kuxhomekeke kwiimfuno zomntu zorhwebo. Ezinye zezinto ezaziwayo Amaqonga orhwebo lwe Forex zibandakanya MetaTrader 4 kunye neMetaTrader 5. Ayingawo onke amaqonga orhwebo asimahla nangona. Ngaphandle kwemali ebakho rhoqo ngenyanga, amanye amaqonga anokusasazeka ngokubanzi.
Kunzima kangakanani ukuphumelela kurhwebo nge-forex?
Akukho mathandabuzo ukuba kuthatha ixesha elininzi lokuziqhelanisa nokwenza imali ngokurhweba nge-forex. Ukongeza ekukhetheni isibini esifanelekileyo semali, uqeqesho oluthe rhoqo lubalulekile ukuze ube ngumthengisi oyimpumelelo we-forex.
Ukurhweba nge-intanethi kwi-intanethi ethembisa ukubuyisela okukhulu kubatyali mali kodwa kufuna okuninzi kubo. Kuphela ngabo bakulungele ukulungiselela ukurhweba kwi-intanethi ye-intanethi ngokufanelekileyo kunye nokujongana kakhulu neendlela zokurhweba kwi-forex ekufuneka bangene kwi-marhwebo ye-forex.
Ngeengcebiso ezixoxwe ngasentla, ulungele kakuhle ukuba namava akho okuqala e-forex kwaye ekugqibeleni ungaqala ukufunda urhwebo lwe-forex.